မင်းကွန်းတိပိဋကနိကာယ - Wedding Guide
လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖြင့် ရှာရန် Air Ticketing/Airlines Announcers & Beik Theik Sayar Astrologers Backdrop Decorations Balloon Service Beauty Parlours Bedroom Accessories Biriyani shops Bridal Dress Cake Makers Car/Truck Rental Catering Services Diamonds Door Gifts Dress Hire Emerald Fashion Designer Fitness Centre Flowers and Florist Furniture Gems and Jewelleries Gems Testing Gemstone Pictures Gold Leaf Gilding Services Gold Shops/Goldsmiths Hairdressers Halls for Hire Honeymoon Resorts Hotels Ice cream Invitations Card Jade Jewellery Hire Jewellery Polishing Jewellery Shops Make Up Artists Music Agencies & Band Myanmar Orchestras & Entertainers Pearls Photo & Studio Labs Photographers Platinum Restaurants Rubies Silk Wear Silversmiths/Silver wares Slipper and shoe shops Soft Drink, Juices & Beverages Spa Tailors Tourism Services Traditional Dress Shops Video Recording Services Wedding Planners
တည်နေရာဖြင့် ရှာရန် Ahlone Bahan Botahtaung Dawbon Dagon Dagon Seikkan East Dagon Hlaing Hlaing Thar Yar Insein Kyeemyin Daing Kamayut Kyauktada Lanmadaw Latha Mingalardon Mingalar Taung Nyunt Mayangone North Dagon North Okkalapa Pabedan Pazundaung Sanchaung Seik Kan Shwe Pyi Thar South Dagon South Okkalapa Thingangyun Thaketa Than Lyin Tarmwe Yankin Aung Myay Thar San Amarapura Chan Aye Thar San Chan Mya Thar Si Mahar Aung Myay Pyi Gyi Tagon Pyin Oo Lwin Sagaing Sintgu Madayar Myintnge Monywa Palate Patheingyi kyaukse Tadaoo
မင်းကွန်းတိပိဋကနိကာယ ဘုန်းကြီးကျောင်းသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါတယ်။
ယင်းဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးဧည့်ခံပွဲများ၊ မွေးနေ့မင်္ဂလာပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းကွန်းတိပိဋကနိကာယကျောင်းတွင် ရွှေရတုခန်းမနှင့် ငွေရတုခန်းမဟူ၍ ခန်းမ ၂ ခန်း ရှိပါတယ်။
ရွှေရတုခန်းမတွင် လူဦးရေ အယောက် ၄၀၀ ဆန့်ပြီး အ၀င်အထွက်ဆိုလျှင် ၇၅၀ မှ ၈၀၀ အထိဆန့်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ယင်းခန်းမ၏ မင်္ဂလာအချိန်မှာ နံနက် ၉ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ တစ်ချိန်၊ မွန်းတည့် ၁၂း၃၀ မှ ၂း၃၀ နာရီအထိတစ်ချိန်၊ ညနေ ၄ နာရီမှ ၆ နာရီအထိ တစ်ချိန် ကြိုက်နှစ်သက်ရာအချိန်တွင် မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပနိုင်ပါတယ်။
ငွေရတုခန်းမတွင် လူဦးရေ အယောက် ၃၀၀ ဆန့်ပြီး အ၀င်အထွက်ဆိုလျှင် ၄၅၀ မှ ၅၀၀ အထိဆန့်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ယင်းခန်းမ၏ မင်္ဂလာအချိန်မှာ နံနက် ၁၀ နာရီမှ ၁၂ နာရီအထိ တစ်ချိန်၊ မွန်းလွဲ ၁ နာရီမှ ၃ နာရီအထိတစ်ချိန်၊ ညနေ ၄ နာရီမှ ၆ နာရီအထိ တစ်ချိန် ကြိုက်နှစ်သက်ရာအချိန်တွင် မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပနိုင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးဧည့်ခံရန်အတွက်ရွှေရတုမင်္ဂလာခန်းမဈေးနှုန်းမှာ ၄ သိန်းဖြစ်ပြီး ငွေရတုမင်္ဂလာ ခန်းမဈေးနှုန်းမှာ ၃ သိန်းဖြစ်ပါတယ်။
အကျွေးအမွေးအနေဖြင့် သီးစုံထောပတ်ထမင်း (သို့) ဒံပေါက်နှင့် ရေခဲမုန့် ဆိုလျှင် တစ်ယောက်ကုန်ကျစရိတ် ၃၅၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပြီး ကြက်သားပလာတာနှင့် ရေခဲမုန့် ဆိုလျှင် တစ်ယောက်ကုန်ကျစရိတ် ၂၅၀၀ ကျပ် နှင့် မုန့် ၃ မျိုး၊ ကော်ဖီနှင့် ရေခဲမုန့်ဆိုလျှင် ၂၅၀၀ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
၀န်ဆောင်မှုများအနေဖြင့် နောက်ခံစာသားရေးထိုးပေးခြင်းနှင့် အစားအသောက်ကို ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ အားလုံးစီစဉ်ဆောင်ရွက် ချက်ပြုတ်၊ ကျွေးမွေးဧည့်ခံခြင်းဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးကြောင်း သိရပါတယ်။
ယင်းအပြင် မင်္ဂလာမောင်နှံအလှပြင်ဖို့အတွက် အခန်းကိုလည်း ၀န်ဆောင်မှု ပေးထားပါတယ်။
ကျောင်းတွင် မိတ်ကပ်၊ အခမ်းအနားမှူး၊ ပန်းအလှပြင်နှင့် ဓာတ်ပုံတို့ကိုလည်း ချိတ်ဆက်ပေးကြောင်း သိရပါတယ်။
အမှတ် ၁၆၊ စကားဝါလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
More in this category: « ပိဋကသုံးပုံနိကာယ်စာသင်တိုက်	ကျောက်ဆည်ဓမ္မာရုံ »
ပိဋကသုံးပုံ နိကာယ်စာသင်တိုက်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်တွင်
ရွှေမင်းဝံရိပ်သာသည် ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ခြောက်ထပ်ကြီးဘုရားအနီးတွင်
Inya Kan Pyar Monastery
အင်းယားကန်ဖျားကျောင်းသည် ရန်ကုန်မြို့၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ မြ၀တီဓာတ်ဆီဆိုင်ဘေးလမ်း
Thu Mingalar Yama Le Di Monastery
လယ်တီကျောင်းတိုက်သည် ရန်ကုန်မြို့၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ကျိုက္ကဆံဘုရားအနီးမှာ
သုမင်္ဂလာရာမ လယ်တီဝိပဿ နာကျောင်းတိုက်
သုမင်္ဂလာရာမ လယ်တီဝိပဿနာကျောင်းတိုက်သည် ရန်ကုန်မြို့၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊
Orient Pearl Co., Ltd.
Nan Myint Shwe Yee
(Gems and Jewelleries)
7th Floor, Building C, New Mingalar Market, Corner of Set Yone Road & Banyardala Road, Mingalar Taung Nyunt,Yangon, Myanmar.
E-mail : weddingguide@mmrdpub.com
Copyright ©2018 Wedding Guide. All Rights Reserved.